MoEP/ MoE Union Minister receives Chinese Ambassador
UNION Minister of the Ministry of Electric Power and of the Ministry of Energy U Thaung Han received Chinese Ambassador to Myanmar Mr Chen Hai in Nay Pyi Taw yesterday.
During the meeting, they discussed the cross-border power lines to develop electricity and energy sectors of Myanmar, hydropower projects, gas-fired and thermal power plant projects and further cooperation works in oil and natural gas industries.
Also present at the meeting were Deputy Minister for Electric Power Dr Aung Zeya, Deputy Minister for Energy U Thant Sin and relevant officials.
(၃၁)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့မှ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့် နိုင်ငံအလိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုဇယား(၂၃.၅.၂၀၂၂) ...
(၃၁) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ (၂၂.၅.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပွဲစဉ်ဇယား ...
(၃၁)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့မှ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့် နိုင်ငံအလိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုဇယား(၂၁.၅.၂၀၂၂) ...
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃/၂ဝ၂၂ ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် Online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း ...
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : June 06, 2022
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : May 26, 2022
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ်ခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : June 02, 2022
Closing Date: : May 30, 2022
Closing Date: : May 31, 2022
Closing Date: : January 24, 2022
Closing Date: : December 28, 2021